Mifamatotra tanteraka ny maha-Tily sy ny Fiangonana
Mifamatotra tanteraka ny maha-Tily sy ny fiainam-Piangonana
Datin'ny lahatsoratra 4 avril 2021
Sary: Tily eto Madagasikara/Santatra Andriamitandrina
Ny asa ivelany no fanehoana ny fahaveloman’ny Fiangonana ary anisan’ny tomponandraikitra amin’izany ny Tily. Ho hitan’ise ato :
Inona no atao hoe Fiangonana?
Ny iraka na antom-pisiany
Tomponandraikitra eo anivon’ny Fiangonana ny Tily
Kristianina ny Tily
Mpanompon’Andriamanitra ny Tily
Tsy mihataka amin’ny Fiangonana ny Tily
Tsy hihidy anaty rindrina efatra ny Tily
Ireo synodam-piangonana irotsahan’ny Tily
Ny mampiavaka ny sinodam-piangonana tsirairay avy.
Ny zavatra andrasan’ny Fiangonana amin’ny Tily eto Madagasikara sy ny andrasan’ny Tily amin’ny Fiangonana.
Avy amin’ny teny grika hoe eikes, izay midika hoe “trano”. Tamin’izany nefa tsy mbola nanana trano fiangonana ny kristiana. Tsy ny trano hita maso loatra no ao an-tsain’ny mpanoratra.
Ny eikes koa dia azo adika hoe “ankohonana” na “fianakaviana” na “fikambanana na “fiombonana” koa azo lazaina fa ny trano dia tranon’Andriamanitra, mba hiombom-po amam-panahy amin’ny firaisana amin’i Kristy.
Ankohonan’Andriamanitra ny Fiangonana
Ny Fiangonana dia fianakavian’Andriamanitra, izany hoe ireo olona manaiky ny antson’Andriamanitra. Miantso olona handray ny famonjeny Andriamanitra : misy ny mihaino sy manoa fa misy ny tsy mihaino na/sady mamaly “tsia”.
Ireo nanaiky ny antson’Andriamanitra ireo no nantsoina hoe ekklesia, izany hoe “fikambanan’ny olona nantsoina”.
Izany hoe, ny Fiangonana dia Fikambanan’ny mpihaino ny Tenin’Andriamanitra ka mamaly izany, ary velona amin’ny firaisana amin’ny Fanahy Masina sady manome izany firaisana izany
An’Andriamanitra irery ny Fiangonana.
Miavaka amin’izao tontolo izao satria avy amin’izao tontolo izao izay manohitra ny fahefan’Andriamanitra no niantsoan’Andriamanitra azy. Raha nantsoin’Andriamanitra izy dia nohamasininy koa (Jaona 17, 16-17)
Ireto no maneho ny fahamasinan’Andriamanitra:
Ny asany amin’Andriamanitra
Manahaka an’Andriamanitra: manana ny toetrany, manao ny sitrapony (manohitra ny devoly)
Vavolombelon’I Jesoa Kristy ny Fiangonana
Vavolombelon’I Kristy sy ny finoana Azy eto an-tany ny Fiangonana, ka mitory ny teniny sy ny asany, ary mandresy lahatra izao tontolo izao mba hanaiky sy hanaraka Azy.
Ny iraka na antom-pisian’ny Fiangonana
Ny atao hoe Iraka dia avy amin’ny teny latin hoe misio.
Ny iraka nataon’Andriamanitra tamin’ny alàlan’Izy Tenany dia Jesoa Kristy: Andriamanitra no nidina voalohany nanao iraka ary Izy tenany no Mpaniraka sady irahina, no izy koa vontoatin’ny iraka (Jaona 3, 16)
Iraka nampanaovin’Andriamanitra ny olona: rehefa nanao ny iraka Andriamanitra, izay niantefan’izany dia irahiny indray ho any amin’izao tontolo izao (Matio 28, 18-20 “ilay fanirahana lehibe)
Toy izao no vontoatin’io iraka io :
Jesoa Kristy no Tompo sy Mpamonjy izao tontolo izao.
Ny fibebahana no tànana handraisana izany famonjena izany.
Ny fanafahana ny gejan’ny mila vonjy dia natokana ho asam-Piangonana sy maha-izy azy rahateo.
Ny olona rehetra (na iza na iza) sy ny olona manontolo (saina, vatana, fanahy, fihetseham-po) no iantefan’ny iraka.
Sary: Tily Matsiatra Ambony
Ny maha-kristiana no fototra mialoha ny maha-tomponandraikitra.
avy amin’ny teny grika khrisitianos , khristos : mpianatra, mpanaradia na mpomba an’I Kristy izay miorina amin’ny Soratra Masina rehetra (lioka 24, 27)
hita ao amin’ireto telo ireto ihany: asa 11, 26 Asa 26, 28, 1Pet 4, 16: izay manondro ny pentekosta, fotoana nahaterahan’ny Fiangonana, sehatra iasan’ny Mpiandraikitra Tily
Ny teny hoe Kristianina dia entina milaza ny vondron’olona niala tamin’ny fivavahana Jiosy, araka ny fanambaran’i Lioka ao amin’ny Asa 2, 42 hoe: “ary izy ireo naharitra tamin’ny :
sy ny fiombonana
sy ny famakiana ny mofo
ary ny fivavahana”
Ny Kristianina dia ireo no olona nahatsiaro “voatsindrona” tao am-pony ka nanolo-tena hatao batisa.
Ny teny hoe Kristianina dia midika faharetana, toetra tsy foronina fa ateraky ny firaisana amin’Andriamanitra ao amin’I Jesoa Kristy sy ny Fanahy Masina.
Izy no andry mpiara-miasa amin’I Kristy hanatanteraka ny famonjena hatramin’ny farany, hahataona olona hanatona Azy.
Izy no andry iankinan’ny manodidina azy hanamafy orina ny finoany amin’ny alalan’ny :
fahaizana miombom-po amam-panahy amin’Andriamanitra mamakivaky ny onjam-piainana rehetra
vavaka mangina sy ampahibemaso ataony ho an’ny beazina izay nanokanan’ny Fanahy Masina azy
Mafy orina isika satria miorina ambony vatolampy (Matio 16, 18) ka tsy haharesy azy akory ny tetik’i Satana mpandrava. Andriamanitra no mpanorina, mampaharitra ary Tompon’ny Fiangonana. Na dia mbola eo an-tanim-piadiana amin’ny fahavalo maro aza ny Fiangonana dia manohatra noho ny mpandresy amin’ny alalan’I Jesoa Kristy.
Tsarovy mandrakariva fa tsy mandeha ho azy akory ny fitondran’ny Tompo ny Apostoly 12 lahy, izay sarin’ny Fiangonana kely… kanefa tsy nandao azy ny Tompo.
Raha sanatria misy zavatra mifanohitra amin’ny eritreritra:
mametraka andraikitra ho an’ny Tily izany.
tsy maintsy mijanona ho modely tsara halain-tahaka ny Tily manoloana ny tsy fijoroan’ny sasany.
saino sy eritrereto Andriamanitra: ny Teniny, ny asany, ny fandreseny izay efa nomena ny Fiangonana mba hifikirana Aminy: ho fiasana mahomby hanarina am-pitiavana sy amim-panetren-tena ny tsy mety.
Ny asa ivelany no fanehoana ny fahaveloman’ny Fiangonana ary anisan’ny tomponandraikitra amin’izany ny Tily.
Fampiharana ny fanabeazana voaray tao am-Piangonana ny asa atao any ivelany, isan’izany ny asa firotsahana maha-Tily.
Tsy maintsy mitady lalana hikaroka ireo mbola any ivelan’ny vala ny Tily, mba hahatonga azy ireny ho tafiditra ao am-balan’I Jesoa Kristy.
Tsy tokony hionona amin’ny mahazatra ny Tily fa hitrandraka hatrany endrika asa manintona; ho fitoriana ny Filazantsara sy asa sosialy hampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo.
Synodam-piangonana Fiantsoana ny skoto / Tily ao aminy
FLM: Fiangonana Loterana Malagasy Firaisan’ny Skoto FLM
METM: Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara Sampana Fanabeazana TIly sy MPAnazava
EEM: Eklesia Episkopaly Malagasy (Anglikana) SKOtisma Anglikana
FJKM: Fiangonan’I Jesoa Kristy eto Madagasikara SAmpana MPAnazava sy TIly
FMTA: Fiangonana Protestanta Malagasy Tranozozoro Antranobiriky SAmpana TIly sy MPAnazava
Samy Fiangonana tsy katolika avokoa ireo, sady mandala ny fisokafana sy ny fiombonana (ohatra : ny ekiomenisma) , ka izany no iantsona antsika Mpanazava sy Tily eto Madagasikara (MTEM) ho isan’ny Fikambanana Unionistes.
Ny mampiavaka ny sinodam-piangonana tsirairay avy:
Ireto, farafahakeliny, no mampiavaka sy maha-samy hafa ny sinoda iorenantsika ka mila fahafantarana sy fanajana
Fomba sy tarazo ao aminy
Rafitra sy fomba fiasa
Litorjia na ritoaly
Ny foto-pinoany sy ny foto-pampianarany
Ny zavatra andrasan’ny Fiangonana amin’ny Tily eto Madagasikara sy ny andrasan’ny Tily amin’ny Fiangonana
Voafariparitra anatin’ny fitsipika isanisany avy ireo.
← Hira fanekena skoto → Jamboree 2023 : Tandremo voalohany!